Allgedo.com » Wafdi ka socda Urur goboleedka IGAD oo gaaray magaalada Kismaayo
Waxa magaalaada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose gaaray wafdi ka socday dowlad goboleedka Igad kaas oo u kuur galaya xaaladda jubooyinka iyo sida haatan wax u socdaan,.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Jubooyinka ee la sheegay inay sida kmg ah howsha u sii wadayaan ayaa kusoo dhaweeyay wafdigaan oo la dajiyay xarunta Jaamacadda Kismayo oo Fariisin ay u noqotay ciidanka iyo maamulka Kismaayo ka taliya.
Wafdigaan ayaa waxaa ay kulamo la qaateen Axmed Madoobe oo ah mas’uulka ugu sareeyo Maamulka Jubooyinka,General Cali Madoobe oo horey u ahaa Taliyaha ciidanka Booliska Somalia iyo Mas;uuliyiin kale oo ka tirsan Jubooyinka.
Wafdigaan aya la sheegay inay yihiin kuwo eegaya sida ay wax u socdaan iyo qaabka loo dhisi karo maamul rasmi ah oo Jubooyinka ay yeeshaan isla markasana ogaanaya sida ay u suura gali karta ergooyin la sheegay inay ka qeyb qaadan doonaan maamul u samaynta deeganadaas.
Si kastaba Wafdigaan ayaa la hadli doonna warbaahinta kadib kulamada ay la qaataan iyagoo ka warbixin doonna ujeedada Safarkooda.
Tagitaanka wafdigaas ee magaalada Kismaayo ayaa kusoo aadaya xili dhawaan lagu wado in Kismaayo loooga dhawaqo maamul goboleed maalmahan samayntiisa la waday.